गृह - शब्द फाउंडेशन • सोच र भाग्य को प्रकाशकहरु
चिन्ता र डस्टिनको प्रकाशकहरू
अब तपाई एक व्यक्तिको रूपमा जानकारी को लागी महत्त्वपूर्ण जानकारीमा तर्जित हुनुहुन्छ जुन पुस्तकमा समावेश छ सोच र भाग्य हेरोल्ड डब्ल्यू पेरिसिवल द्वारा, 20 सदी को सबै भन्दा ठूलो विचारधारा। साढे वर्षका लागि प्रिन्टमा, सोच र भाग्य मानवता को लागी प्रस्तावित सबै भन्दा पूर्ण र गहन खुलासा मध्ये एक हो।
यस वेबसाइट को मुख्य उद्देश्य बनाउन को लागी छ सोच र भाग्य, साथै विश्वका मानिसहरुका लागि श्री पर्सिभलका अन्य पुस्तकहरू पनि उपलब्ध छन्। यी सबै पुस्तकहरू अब अनलाइन पढ्न सकिन्छ र हाम्रो पुस्तकालयमा पहुँच गर्न सकिन्छ। यदि यो तपाईंको पहिलो अन्वेषण हो सोच र भाग्य, तपाईं लेखकको शब्दकोश र परिचयको साथ सुरू गर्न सक्नुहुन्छ।
यस साइटमा प्रयोग गरिएको ज्यामितीय प्रतीकहरूले मेटाफिजिकल सिद्धान्तहरू प्रस्तुत गर्दछ जुन वर्णन गरिएको छ र वर्णन गरिएको छ सोच र भाग्य। यी प्रतीकहरूको बारेमा थप जानकारी पाउन सकिन्छ यहाँ।
यद्यपि इतिहासले देखाउँदछ कि मानव जहिले पनि एच डब्ल्यू पर्सिभल कदको व्यक्तिलाई सम्मान र महिमा दिन झुकाव राख्छ, ऊ आफैं अटल थियो कि ऊ शिक्षकको रूपमा मानिन चाहँदैन। उनले सोध्छन् कि बयान मा सोच र भाग्य प्रत्येक व्यक्तिमा सत्य द्वारा न्याय गरिन सक्छ; यसैले, उनले पाठकलाई उसलाई फिर्ता वा आफैले फर्काउँछ:
म कसैलाई प्रचार गर्न मन लागेन। म आफैले प्रचारक वा शिक्षकलाई विचार गर्दैन। के यो पुस्तकको लागि जिम्मेवार हुदैन कि, म चाहान्छु कि मेरो व्यक्तित्व यसको लेखकको रूपमा नामकरण हुँदैन। म जानकारी प्रदान गर्ने विषयको महानता, रिभ्युभ गर्दछु र आत्म-अवधारणाबाट मलाई मुक्त गर्दछु र नम्रताको दण्डलाई रोक्न चाहन्छु। म सचेत र अमर स्वभावमा हरेक मानव शरीरमा अजीब र चौंकाने बानीहरू बनाउनेछु; र म दिइएको छ कि व्यक्तिले निर्णय गर्नेछ कि उसले के गर्नेछ वा प्रस्तुत गरेको जानकारी संग गर्नेछैन।
- एचडब्ल्यू पर्सिवल
HW प्रतिद्वंद्वी बारेमा
म व्यक्तिगत रूपमा विचार गर्दछु सोच र भाग्य कुनै पनि भाषामा प्रकाशित गरिने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र मूल्यवान किताब बन्न सक्छ।
यदि म एउटा टापुमा मारेको थियो र एउटा पुस्तक लिन अनुमति दिइएको थियो, यो पुस्तक हुनेछ।
सोच र भाग्य ती अचम्मका पुस्तकहरू मध्ये एक हो जुन मानव र मानव जातिको लागि मूल्यवान हुनेछ जुन दस वर्षदेखि अहिलेसम्म नै हुनेछ। यसको बौद्धिक र आध्यात्मिक सम्पदा अयोग्य छ।
जस्तै शेक्सपियर सबै उमेरको भाग हो, त्यसैले हो सोच र भाग्य मानवता को पुस्तक।
पुस्तक सालको छैन, न त शताब्दीको, तर युगको। यसले नैतिकताको लागि एक तर्कसंगत आधार प्रकट गर्दछ र मनोवैज्ञानिक समस्याहरू समाधान गर्दछ जसले उमेरका लागि मानिसलाई अजीब बनाएको छ।
सोच र भाग्य मैले जानकारी खोजेको छु। यो मानवताको लागि दुर्लभ, आकर्षक र प्रेरणादायक वरदान हो।
पढ्ने सोच र भाग्य म आफैलाई अचम्मलाग्दो, चकित, र तीव्र रुचि राख्छु। कुन पुस्तक कुन नयाँ विचारहरू (मलाई मेरो) समावेश छ!
कहिलेकाहीँ, र मेरो सम्पूर्ण जीवनमा एक सच्चा सत्य खोजकर्ता भएको छु, मैले निरन्तर ज्ञान पाएका धेरै ज्ञान र ज्ञान पाएको छु। सोच र भाग्य.
जबसम्म मैले यो पुस्तक फेला पारेँ, म कहिल्यै पनि यस टोपी-टुवेली संसारको संगितुकै जस्तो देखिन्छु, त्यसपछि यो मलाई ठूलो द्रुत गतिबाट बाहिर निस्क्यो।
जब म आफैलाई निराशामा फिसाउँदै महसुस गर्छु, म अनियमितमा पुस्तक खोल्छु र पढ्नको लागि ठीक कुरा पढ्छु कि मलाई एक लिफ्ट र मलाई समय चाहिन्छ। साँच्चै हामी सोचिरहेका थियौँ हाम्रो भाग्य। यदि हामीले पालनाबाट सिकाउनुभयो भने फरक जीवन कसरी हुन सक्छ।
पर्सिवलको सोच र भाग्य जीवनको बारेमा सही लिखित जानकारीको लागि कुनै गम्भीर खोजीकर्ताको खोजी समाप्त गर्नुपर्दछ। लेखकले आफू बोल्ने कुरा जान्दछु भनेर प्रदर्शन गर्दछ। कुनै अस्पष्ट धार्मिक भाषा र कुनै अनुमान छैन। यस विधामा पूर्ण रूपमा अद्वितीय, पर्सिभलले उनलाई के लेखेका छन् लेखेका छन्, र उसलाई धेरै कुरा थाहा छ - निश्चित रूपमा अरू ज्ञात लेखकहरू भन्दा बढी। यदि तपाईं को हुनुहुन्छ भनेर सोच्नुहुन्छ भने, तपाईं यहाँ किन हुनुहुन्छ, ब्रह्माण्डको प्रकृति वा जीवनको अर्थ तब पर्सिभलले तपाईंलाई निराश पार्दैन ... तयार हुनुहोस्!
यो यस संसारको ज्ञात र अज्ञात इतिहासमा लेखिएको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण किताबहरु मध्ये एक हो। विचारहरु र ज्ञान को कारण अपील गरे, र सत्य को "अंगूठी" छ। एचडब्ल्यू एक्सेल्युल मानिसजातिको लागि एकदम अज्ञात फायदेक्टर हुनुहुन्छ, किनभने उनीहरूको साहित्यिक वरदानहरू प्रकट हुनेछन्, जब निष्पक्ष रूपमा जाँच गर्थे। म धेरै "अनुशंसित पढाई" सूची मा आफ्नो मास्टर कार्य को अनुपस्थिति देखि आश्चर्यजनक छ कि मैले पढेको धेरै गम्भीर र महत्वपूर्ण पुस्तकहरु को अन्त मा। उहाँ साँच्चै एउटा सोचाइ मानिसहरूको संसारमा सबैभन्दा राम्रो रहनुभएको छ। एक सुखद मुस्कान र कृतज्ञता को भावना भित्र जान्छ, जब पनि म त्यस आशीर्वाद भएको जस्तो लाग्छ, मानिसहरु को हेरोल्ड वाल्विन पर्सेवलको रूपमा जान्छ।
मनोविज्ञान, दर्शन, विज्ञान, भौतिक विज्ञान, धर्मशास्त्र र धार्मिक सम्बन्धका विषयहरूमा धेरै किताबहरु बाट प्रचलित नोटहरू लिने 30 वर्ष पछि, यो अद्भुत पुस्तक मैले धेरै वर्ष को लागि खोज्दै सबै को पूरा जवाफ हो। जब म सामग्रीहरू अवशोषित गर्दै त्यहाँ सर्वोच्च मानसिक, भावनात्मक र भौतिक स्वतन्त्रतालाई उच्च प्रेरणाको साथमा परिणाम गर्दछ जुन शब्दहरू व्यक्त गर्न सक्दैनन्। म यो पुस्तकलाई सबैभन्दा उत्तेजक र खुलासा गर्दछु कि मैले कहिल्यै पढ्ने आनन्द पाएको छु।
मैले पढेको सब भन्दा राम्रो किताब; धेरै गहन र यसले एकको अस्तित्वको बारेमा सबै कुरा वर्णन गर्दछ। बुद्धले धेरै अघि भनेका थिए कि विचार हरेक कार्यको आमा हुन्। यस पुस्तक भन्दा राम्रो अरू केहि छैन। धन्यवाद।
हाम्रा पाठकहरूका आवाजहरू